प्रभावकारी प्रतिलिपि अधिकारका लागि3कुञ्जीहरू Martech Zone
Copy कुञ्जीहरू प्रभावकारी प्रतिलिपि अधिकारमा
बुधबार, मार्च 23, 2011 बिहीबार, सेप्टेम्बर 19, 2013
राम्रो प्रतिलिपि हास्यास्पद चीज हो। यो बनाउनको लागि अविश्वसनीय कठिन तर पचाउन सजिलो छ। राम्रो प्रतिलिपि अधिकार सरल, कुराकानी, तार्किक र पढ्न सजिलो छ। यसले उत्पाद, सेवा वा संगठनको सार र भावना क्याप्चर गर्नुपर्दछ, जबकि सीधा पाठकसँग जडान गर्दै।
एक copywriter को काम गाह्रो छ। सर्वप्रथम तपाईले सबैभन्दा आधारभूत स्तरमा लेख्नु भएको कुरा भत्काउनु पर्छ। तपाईंलाई कति धेरै ठूला शब्दहरू थाहा छ भनेर देखाउनको लागि प्रतिलिपि अधिकार स्थान होइन। यो पोइन्टमा पुग्न र अधिकतम मानको बारेमा हो। तर यो उत्पादको बारेमा मात्र होईन।
ग्राहकलाई चिन्नु भनेको प्रभावकारी प्रतिलिपि लेख्नको लागि पहिलो चरण हो।
त्यो अन्तिम वाक्य यति महत्त्वपूर्ण छ कि म यसलाई दोहोर्याउनेछु। ग्राहकलाई चिन्नु भनेको प्रभावकारी प्रतिलिपि लेख्नको लागि पहिलो चरण हो.
चाहे तपाइँ विज्ञापन प्रतिलिपि, एक कम्पनी न्यूजलेटर, वा कार्यको लागि एक-लाइन कल लेख्दै हुनुहुन्छ, एक प्रतिलिपि लेखकको काम भनेको पाठकको टाउको भित्र पस्नु हो। तिनीहरूको ध्यान अवधि कति छ? उनीहरूले के आशा गरिरहेका छन्? उत्पादनले उनीहरूलाई कसरी मूल्य दिन्छ? किन तिनीहरू एक विशेष ब्राण्डको साथ अर्कोमा जान्छन्?
लक्षित श्रोतालाई चिन्नुले तपाईंलाई कसरी प्रतिलिपि उपभोग गर्दछ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। कस्तो प्रकारको अपेक्षाहरू वा भूतकालका अनुभवहरू उनीहरूसँग कम्पनी वा तपाईंको पिचिंग उत्पादन गर्दछ? कस्तो प्रकारको कार्य वा प्रतिक्रिया तपाइँ तिनीहरूबाट माग्दै हुनुहुन्छ?
यी राम्रा प्रतिलिपि लेखकहरूले पिच शिल्प गर्नु अघि सोध्नु भएका केही प्रश्नहरू हुन्। तपाईको लक्षित पाठकको बारेमा जति धेरै जान्नुहुन्छ, उनीहरूको तल्लो रेखामा अपील गर्न सजिलो हुन्छ। एक ठोस पिच तपाईं आफ्नो जीवन कसरी सजिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर पाठकलाई थाहा दिन डिजाइन गरिएको हो।
उत्पादन थाहा पाउनुहोस्।
तपाइँको आदर्श पाठकको दिमागमा छिर्दा तपाइँले बेच्न कोशिश गरिरहनु भएको उत्पादनलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। नेस्ट स्टेपले पिचलाई टेलरिंग गरीरहेछ उनीहरूको विशेष आवश्यकताहरू पूरा गर्न। समान उत्पादन पिच गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर राम्रो प्रतिलिपि अधिकारकर्ताहरूले त्यो सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका फेला पार्दछन्।
यहाँ उदाहरण छ: म सजिलैसँग चार वा पाँच प्रकारका ग्राहकहरूलाई नयाँ ल्याप टप किन्न रुचि लिन चित्रण गर्न सक्छु, तर ती सबै उत्पादनसँग भिन्न छन्।
टेक गीक प्रोसेसरको चश्मा जान्न चाहन्छ, यसमा कति USB पोर्टहरू छन्, यसले कती डाटाले प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ र कुन प्रकारको सफ्टवेयरले समर्थन गर्दछ।
गेमर इन्टरनेट गति, भिडियो गुणस्तर, ध्वनि कार्ड, के खेलहरू उपलब्ध छन् र यदि यसले कन्ट्रोलर ह्यान्डल गर्न सक्दछ भनेमा रुचि छ।
व्यवसाय समर्थक वाई-फाई कनेक्टिविटी, प्रयोगमा सजिलो, कागजात अनुकूलता र टेक समर्थन खोजिरहेको हुन सक्छ।
अडियोफाइल एकै पटक दर्जनौं गीतहरू डाउनलोड गर्दछ र एक घर स्टीरियो प्रणाली मार्फत आफ्नो बढ्दो संगीत पुस्तकालय खेल्न सक्षम हुन चाहन्छ।
किनभने हामीले लक्षित दर्शकहरू र उनीहरूको आवश्यकताहरू पहिचान गरेका छौं, हामी ती उत्पादनहरूलाई उत्तम तरिकामा हाईलाइट गर्न सक्दछौं ती आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि।
पिच कार्बनिक रूपमा शिल्प गर्नुहोस्
आजका दिनहरूमा धेरै नक्कल प्रतिलिपिहरू केवल कुञ्जी शब्दहरू प्रयोगमा केन्द्रित छ। एसईओ सिद्धान्तहरू निश्चित रूपमा सुरू गर्नको लागि राम्रो स्थान हो, तर एक राम्रो प्रतिलिपि लेखकले कुञ्जी शव्दहरूमा स्वाभाविक रूपमा बुनाउँदछ, ती स्थानहरूमा उनीहरूलाई जबरजस्ती नगरी तिनीहरू बाड्दैनन्। खराब लेखकहरूले केवल तिनीहरूलाई भित्र जाम गर्दछ, कीवर्डहरू अन्त्येष्टिमा जोकर जस्तो देखिन्छन्।
मेरो विचारमा, उत्तम प्रतिलिपि अधिकार कडा बेच्ने जस्तो लाग्दैन। धेरै उपभोक्ताहरू पिचको साथ टाउकोमा हिर्काउन मन पराउँदैनन्। तिनीहरू उत्पादनहरूसँग सम्बन्धित छन् जुन उनीहरूको आवश्यकता र संवेदनशीलतामा फिट हुन्छन्। किन यो लेगवर्क गर्न महत्त्वपूर्ण छ जब यो श्रोता र उत्पादनको अनुसन्धानको कुरा आउँदछ।
तिम्रो के बिचार छ? तपाईं प्रभावकारी प्रतिलिपि लेखनमा के खोज्नुहुन्छ? तल टिप्पणीहरूमा तपाइँलाई विचार छोड्नुहोस्।